कसलाई भोट दिने ? - विचार/विश्‍लेषण - कान्तिपुर समाचार
जनता गुनाका नेता हुन्छन्, जनताका विचार र निर्णय फेरिए मात्र नेता फेरिन्छन् र देश फेरिन्छ ।
कार्तिक २९, २०७४-चुनाव निष्पक्ष हुनु, मतदाताले करकाप मुक्त भई मतदान गर्न पाउनु लोकतन्त्रको जग बलियो भएको मानिन्छ । नेपालमा यस हिसाबले लोकतन्त्रको जंगे ढुंगा दह्रो गाडिइसकेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । मधेसका घना बस्तीदेखि पहाडका भिरपाखाका गाउँसम्ममा पनि भोट हाल्न विप्लव माओवादीको अपत्यारिलो छिटपुट गोधूली गीत (स्वान सङ) बाहेक रोक छैन । तर मत कसलाई दिने ? कुन दल र कुन उम्मेदवारलाई किन दिने भन्ने यक्षप्रश्नको सामना गर्न मतदाता तयार छन् त यसपालिको चुनावमा ? र मत परिणामले लोकतन्त्रीय प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउँछ त ? स्वच्छ शासन, थेग्न सकिने (सस्टेनेबल) द्रुत विकास, संघर्षरत सीमान्तकृतलाई समान अवसर र प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गराउन सक्छ त ? अनि नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई भावी सन्ततिका लागि अझ संरक्षित पार्न सक्छ त ?
› प्रमोद मिश्र
‘समानान्तर’ निकाय हुनुको भ्रम ›